Iphromoshini, Isigamu senani 1 Ifulethi Lombhede NgeRichmond Park
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Rasa
Ifulethi lengadi lintofontofo futhi linethezekile ngokungena kwalo eseceleni nendawo yokupaka. Kuyakhanya, libalele, kufudumele ezinsukwini zasebusika nekhishi elihlomele kahle kanye ne-WiFi. Indlu Ibuyela eRichmond Park. Inkundla yegalofu yaseRichmond park ihamba ngomzuzu owodwa ukusuka endlini noma ungangena ngeRobin Hood Gate okuwuhambo lwemizuzu eyi-7. I-Stag Lodge Stables nayo iwuhambo lwemizuzu engu-7 ukusuka endlini uma ufuna ukuzama ukugibela amahhashi. Kukhona i-Asda Superstore engamahora angama-24 maqondana nendlu.
Ifulethi elinethezekile futhi elinethezekile elingu-1 eline-WiFi nendawo yokupaka.
Ikhishi elinakho konke ongase ukudinge ukuze uthole ukudla okusheshayo.
Igumbi lokuhlala elinepulani elivulekile eline-TV nombhede usofa ongahlalisa abantu ababili.
Igumbi eliphindwe kabili elinombhede wabantu ababili onethezekile kanye nendlu yangasese enebhavu neshawa.
Kuzohlinzekwa ilineni lekhwalithi yehhotela namathawula
4.75 ·68 okushiwo abanye
Umnyango wegalofu waseRichmond park uwuhambo lweminithi elingu-1 ukusuka endlini kanti uPutney heath kanye newimbledon common bobabili bangaphakathi kwebanga lokuhamba. Kukhona i-24hr Superstore ebhekene ngqo nendlu. Imizuzu eyi-15 ukuya ePutney noma eKingston.
I-Wimbledon All England Lawn Tennis & Croquet Club iwuhambo lwemizuzu eyi-10. Ikhampasi yase-Roehampton University iyimizuzu emi-5 yokushayela kanti ikhampasi yasenyuvesi yaseKingston iqhele ngemizuzu eyi-10. Isibhedlela i-Queen Mary sihamba imizuzu emi-5.
Sizotholakala ngocingo nange-imeyili amahora angu-24 ngosuku nganoma yiziphi izinkinga futhi sizoba phezulu endaweni njengoba sihlala lapho!
URasa Ungumbungazi ovelele